कांग्रेस अधिवेशन : सिन्धुपाल्चोकमा कहाँ कस्को दावी ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ कांग्रेस अधिवेशन : सिन्धुपाल्चोकमा कहाँ कस्को दावी ?
कांग्रेस अधिवेशन : सिन्धुपाल्चोकमा कहाँ कस्को दावी ?
Sindhu Khabar शनिबार, २०७८ असोज ९ / १६:५०
चौतारा । नेपाली कांग्रेसको १४ औं अधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा सिन्धुपाल्चोकका १२ वटै स्थानीय तहको नेतृत्वको होडमा विभिन्न अनुहारहरु देखापरेका छन् । (आज)असोज ९ मा हुनुपर्ने स्थानीय तहको अधिवेशन स्थगित भएपछि विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकामा झनै आकांक्षीको संख्या बढ्दो छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तोकेको मितिमा अधिवेशन गर्न नसक्दा अब कहिले हुन्छ भन्ने अन्यौलकै अवस्थामा पनि गाउँ तथा नगर सभापतिका आकांक्षी बढेका हुन् । कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाको सभापति पदका लागि केहीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । भने, कतिपय अधिवेशनको मिति कुरेर बसिरहेका छन् । १२ स्थानीय तह रहेको सिन्धुपाल्चोकमा हरेक पालिकामा दुई भन्दा धेरै आकांक्षी रहेका छन् ।
जिल्ला निर्वाच्न अधिकृत छविरमण निरौलाले अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थानीय तहको अधिवेशन स्थगित गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको दाबी चलिरहँदा अधिवेशन नै स्थगित भएपछि अधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने कार्यकर्ताहरुको तर्क छ ।
कहाँ कस्को दावी :
१) शम्भुबहादुर तिमिल्सिना
२) रेशम तामाङ
१) मोहनकुमार श्रेष्ठ
२) रमेश राउत
३) देवराज श्रेष्ठ
४) भक्तध्वज बोहरा
५) मोहनभक्त श्रेष्ठ
१) गंगाबहादुर श्रेष्ठ
२) घ्याम्सो लामा
३) डुपाछिरिङ लामा
१) नरेश कार्की
२) रुपकाजी लामा
३) श्रवण जिसी
४) नेत्रबहादुर कार्की
५) रामकृष्ण राजभण्डारी
६) अण लामा
१) प्रकाश दाहाल